कस्तो अनौठो ! समुद्रको बीचमा आश्चर्यजनक आ ‘गोको मु’स्लो देखा पर्यो – List Khabar
Home / समाचार / कस्तो अनौठो ! समुद्रको बीचमा आश्चर्यजनक आ ‘गोको मु’स्लो देखा पर्यो
कस्तो अनौठो ! समुद्रको बीचमा आश्चर्यजनक आ ‘गोको मु’स्लो देखा पर्यो
admin4weeks ago समाचार Leaveacomment 20 Views
एजेन्सी । पानीमुनिको ग्यास पाइप ‘लिक’ हुँदा गल्फ अफ मेक्सिको (समुद्र)मा पाँच घण्टाभन्दा लामो समयसम्म ठूलो आ’गोको ज्वा’ ला नि स्कि एको छ । सो दृश्य फिल्महरुमा देखाइने काल्पनिक एक्सनभन्दा कम थिएन । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा यसको खुब चर्चा भएको छ । मानिसले यसलाई फिल्म ‘लर्ड अफ द रिङ्स’को नरक समान ज्वा’ ला मुखी, ‘मोरडोर’सँग तुलना गरेका हुन् ।
समुद्रको बीचमा ज्वालामुखी फुटेजसरी पानीबाट ठूलो आ’गो, गोलो आकारमा उ’ म्लि रहको थियो । यस्तो दृश्य यसअघि कहिल्यै नदेखिएको बताइएको छ । कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यो घटना जीवाश्म इन्धनको प्रयोग कसरी जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार हुन्छ भन्ने ग म्भीर उदाहरण भएको समेत बताएका छन् ।
यस घटनाको भिडियो हेर्दा अत्यन्तै चिन्ताजनक देखिएको र ‘नरक’को ढोका खुलेजस्तै दृश्य भएको सायन्स इनिसिएटिभ्सका वरिष्ठ म्यानेजर क्रिस रोबिन्सले बताए । उनका अनुसार यसले सो ठाउँमा पुर्‍याएको क्षतिबारे जाँच गर्न अनुसन्धानकर्ताहरुलाई अनुमति दिइनुपर्छ ।
यसलाई पाँच घण्टापछि नियन्त्रणमा लिइएको मेक्सिकोको राज्यद्वारा सञ्चालित तेल कम्पनी पेमेक्सले जनाएको छ । यसका कारण कसैलाई क्षति नपुगेको र घटनाबारे अनुसन्धान गरिने बताइएको छ ।
मेक्सिकोमा इन्धन सुरक्षा निरीक्षक एएसईएकी प्रमुख एन्जेल केरिजेल्सले यसबारे ट्विटरमा पोस्ट गर्दै घटनामा कतै तेल वा ग्यास नपोखिएको बताएकी छन् । तर, पानीको सतहमा कहाँबाट केले आ’ गो लाग्यो भन्नेबारे भने केही जानकारी दिएकी छैनन् ।
Previous बिहेकै रात जब युवतीले…..जे गरिन, युवकले बिहानै पठाईदिए घर !
Next सानी छोरीसंग खेलेर बाइ बाई छोरी भन्दै हिँडेका सरोज, त्यसपछि घर फर्कन पाएनन्